Archaic Aeon, asalka nolosha | Saadaasha Shabakadda
Archaic aeon waxaa lagu calaamadeeyay meteor shower
Archaic Aeon waa muddadii ka horreysay Hadic Aeon. Waxay ku saabsan tahay qiyaastii 3.800 ilaa 2.500 milyan oo sano ka hor. Weli waxaan ku dhex jirnaa Supereon-ka Precambrian, laakiin waa tan ugu horreysa ee aan ku bilaabi karno kala-soocidda xilliyada. Sidii tii ka horeysay, sidoo kale waxaa si xoogan u saameeyay waxa ka dhacayay nidaamka qoraxda.
Precambrian Proterozoic 2.500 540 a
Precambrian Qadiimiga ah 3.800 2.500 a
Precambrian Hadic 4.550 ilaa 3.800
Haddii Hadic aeon uu ahaa asalka iyo bilowgii dhulkeenna, muhiimadda ay leedahay Archaic aeon waxay ku jirtaa bilowga iyo asalka nolosha. Waa in lagu daro, qeexida iyo qeexida daqiiqad sax ah dhacdo kasta oo taariikhda dhulkeena ah, waa, hadaanay ahayn, mid aad u adag. Muddooyinka waa la yaqaan, waa la qeexaa, laakiin mar kale xoojinta, ma jiro taariikh sax ah oo dhacdo kasta leh. Adoo adeegsanaya caqligan oo ah tilmaan ahaan, aan raacno wadadii aan ka tagnay maalmo ka hor.
Iyagu maahan uun wax dhagax ah, waa Stromatolites. Magaalada Shark Bay, Australia.
Sidoo kale loo yaqaan Archaeozoic, waa mid ka mid ah xilliyadii ugu dheeraa ee abid soo maray. Waxay ka kooban tahay gebi ahaanba, ku dhowaad saddex meelood meel wadarta waqtiga meeraheenna. Qoraallada qadiimiga ah, aeon-kii hore wuxuu ahaan jiray mid aan laga sooci karin Hadic, ku biirista labada xilliba mid. Magaca Archaic, oo ka yimid Giriiggii hore, macnihiisu waa "bilow" ama "asal", sababaha looga hadlay awgood. Wax aad u caan ku ah xilligan wuxuu ahaa isbeddelka qolofka dhulka. Tani waxay noo horseedaysaa inaan ka fikirno dhaqdhaqaaqyada saxan ee teknoolojiyada weyn, taas oo keeneysa in laga soo baxo in qaab-dhismeedka gudaha ee meeraha uu aad ugu eg yahay sida aan maanta ku ogaanno.
Si sax ah loo fahmo taariikhda taariikhdan, waa in loo qaybiyaa 4 xilli oo waaweyn. Mid walbana wuxuu ku caanbaxay isbeddello waaweyn.
Qadiimiga ah Neoarchic 2.800 2.500 a
Qadiimiga ah Mesoarchic 3.200 2.800 a
Qadiimiga ah Paleoarchic 3.600 3.200 a
Qadiimiga ah Eoarchic 4.000 / 3.800 ilaa 3.600
Qeexitaan deg deg ah oo ku saabsan Archaeozoic waxaa lagu qeexi karaa dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay. Unugyadii ugu horreeyay ee heterotrophic iyo photosynthetic anaerobic ayaa u muuqday (cyanobacteria). Qaab-dhismeedyadii ugu horreeyay ee asalka noolaha ayaa sidoo kale bilaaba, stromatolites. Sidoo kale qaaradaha ugu horeeya waxay la soo baxaan sameynta iyo bilowga taarikada tectonic. Ogsijiin waxay bilaabmaysaa in lagu sii daayo jawiga. In kasta oo ay tahay xilli lagu tilmaamayay dhicitaanka meteorites, haddana sidoo kale waa xilligii roobkii weynaa ee ka jiray uu joogsaday.
Dhulku weli wuxuu ku jiraa qaab joogto ah, dhagaxa iyo qarxyada ayaa aad u badnaa
Waxay ahayd xilli socdey illaa 200/400 milyan oo sano. Waxay kuxirantahay isha lagala tashaday, maadaama Guddiga Caalamiga ee Stratigraphy uusan aqoonsaneyn xadka hoose ee waqtiga. Way kaga duwan tahay inta kale, taas oo ah waa daqiiqadda ay noolaha ugu horreeya soo muuqdaan. Waa taariikh 3.800 bilyan sano ka hor. Kadib, 3.700 bilyan sano ka hor, noolaha ugu horreeya ee kiimikada sameeya ayaa soo baxa. Waa nooleyaal in uma baahna iftiinka qoraxda si ay u helaan tamartooda.
Socodka kuleylka ee jira wuxuu 3 jeer ka sarreeyay kan hadda jira, cimilada jirta waxay ahayd mid aad u kulul. Tani kaliya ma qeexin da'daan, laakiin waxay calaamadeysay eon dhan. Kaliya kan xiga, ee Proterozoic, qulqulka ayaa labanlaabmi doona midka hadda socda. Kuleylkan dheeriga ah waxaa u sabab ahaa kuleylka ka dhashay samaysanka xudunta birta meeraha. Sidoo kale soo saar weyn oo kuleylka shucaaca ah ee loo yaqaan 'radionuclides' ee muddada gaaban, sida Uranium-235. Waa in la ogaadaa dhaqdhaqaaqa fulkaanaha ee ka jiray adduunka oo dhan, oo ay weheliyaan qaraxyada fulkaanaha iyo godadka lafaha. Dhamaantood waxay sii wateen inay keenaan baro badan oo kulul.
Bakteeriyada Anoxygenic ayaa soo muuqata. Taasi waa, inay sawirro galaan, laakiin ma eryaan oksijiinta
Waxaa ku jira inta u dhaxeysa 3.600 ilaa 3.200 million years. Noocyada nolosha ee ugu caansan ayaa bilaabmaya. Halkan noolaha ayaa soo korayay mar horena waxaan ka helaynaa microfossils sifiican loo ilaaliyay laga soo bilaabo 3.460 bilyan sano ka hor, Galbeedka Australia. Stromatolites-ka.
Bakteeriyada waxay biloowdaa inay sawir qaaddo, si aad tamar uga hesho qorraxda. Markii hore waxay ahaayeen sunsiyeyaal, wali ma aysan siinin oksijiin. Waqtigan xaadirka ah, waxaan ka heli karnay noocan ah sawir-qaadashada bakteeriyada cagaaran ee ka timid baaruudda oo aan ahayn baaruud, iyo bakteeriyada guduudka ah Noocan helitaanka tamarta waxaa la aasaasay illaa dhammaadka Archaic eon.
Waxyaabo badan oo qeexay xilligan. Waxaa suurtagal ah in midowga qaar ka mid ah godadku ay sameeyeen Vaalbará, taas oo ah mala-awaalka ugu horreeya ee xoog badan ee jiray. Waa in la ogaadaa in khubarada oo dhami aysan isku raacsaneyn inuu jiray. Waxay sidoo kale ahayd dhammaadkii xilli dambe oo qubeys ah. Boqolaalkii sano ee la soo dhaafay oo dhan, Dhulka ayaga ayaa ku dhacay.
Muuqaalka mala awaalka ah ee meeraha xilligii barafka ugu horreeyay
Waxay qaadatay inta udhaxeysa 3.200 iyo 2.800 milyan oo sano. Qaaradaha sare ee mala-awaalka ah Vaalbara waa jajabaysaalahaa dambe ee xilligan, siinta hab Neoarchic ah. Waxyaabaha la muujiyo waa taas waxaa markii ugu horreysay ka dhacay baraf-weyne weyn meeraha. Si aad u qiyaasi karto sida ay tahay inay u ekaato, biyaha ku jira badaha waxay lahaan karaan bir bir badan. Taasi waxay siin lahayd midab cagaar ah. Iyo jawi aad loogu soo oogay kaarboon laba ogsaydh, cirku wuxuu soo bandhigi lahaa codad casaan ah.
In kasta oo ay leeyihiin dareen cusub oo ku saabsan samaynta taarikada qaaradaha, haddana may ahayn inay qabsadaan wax ka badan 12%. Dhanka kale, badaha, iyagu kama joogsan lahaayeen samaysankooda. Dusha sare ee ay gaarayaan wuxuu horey u ahaa qiyaastii 50% mugga ay hadda hayaan.
Dhinac mala awaal ah oo bilaabi lahaa inuu muuqdo cyanobacteria awgeed
Xilligii ugu dambeeyay iyo dhammaadkii Archaic eon. Wuxuu kala fahmay 2.800 ilaa 2.500 milyan oo sano ka hor. Bakteeriyada ayaa sii waday horumarinteeda, horeyna bilaabaan inaad sawirro ka dhigto sii deynta oksijiinta, cyanobacteria. Ogsijiin weyn oo molecule ah ayaa ka bilaabata meeraha taasoo leh cawaaqibkeeda eon xiga. Isku soo wada duuboo sun badan oo oksijiin ah ayaa ku dambayn doonta keenista qiiqa weyn goor dambe.
Maamulayaasha jiray, sida Vaalbara, iyo mid kale oo la yiraahdo Uur, way yaraayeen. Ma ahan kaliya inay bilaabeen shukaansi, laakiin maxaa yeelay jiliftiisa ayaa is cusboonaysiinaysay. Lidi ku ah xasilloonida ay qaaradaha maanta isku soo bandhigaan. Waqtigaas, foolkaanadii bilaabantay inay soo muuqato, ayaa door weyn ka ciyaaray, oo ay weheliyaan kala qaybsanaantii iyo godobtii soo ifbaxayay.
Ma noqon laheyn illaa iyo maalinta xigta, ee Proterozoic, halkaas oo qaababka nolosha ee ka sii adag ay bilaabeen inay ka muuqdaan.
Haddii aad xiiseyneysay inaad ogaato bilowga wax walba. Waxaan kuu soo bandhigeynaa Hadic aeon, bilowgii dhulkeenna. Halka ay sidoo kale ka muuqato, abuuritaanka dahsoon ee Dayaxa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Archaic Aeon
Pampero, Zonda iyo Sudestada